LEGO ကဘယ်သူလဲ Marvel Blade of Thanos with Studios 'Gamora?
30 / 08 / 2021 30 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 420 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Gamora, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, Lego, Lego Marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, သေးသေးလေး, စတား-သခင်ဘုရား, Thanos, T'Challa စတား - Lord, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
Lego 71031 Marvel စတူဒီယို နဂါးငွေ့တန်းမှာအန္တရာယ်အရှိဆုံးအမျိုးသမီးကိုပိုကြောက်စရာကောင်းအောင်လုပ်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့် Thanos ရဲ့ Blade of Thanos နဲ့ Gamora ကဘယ်သူလဲ။
Gamora သာ Thanos ကိုဘယ်တုန်းကမှမထားခဲ့ဘူးဆိုရင်အရူး titan နဲ့စစ်ဘုရင်အဖြစ်သူ့အခန်းကဏ္ကိုဆက်ယူမှာပေါ့။ ၎င်းသည်နောင်လာမည့်ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုအတွက်မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည် Marvel သူမအနေနဲ့ Guardians of the Galaxy မှာမပါခဲ့ရင် streaming series ကဒီ Gamora ဗားရှင်းနဲ့မေးလိမ့်မယ်။
Gamor ၏ရည်စူးထားသောဇာတ်လမ်းတွဲသည် p အဖြစ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းမရှိသေးပါart ဘာလဲဆိုရင် ... ? ဒီ minifigure ကသံချပ်ကာကိုဘယ်လို ၀ တ်လာသလဲဆိုတာနဲ့လက်ရှိစီးရီးတွေရဲ့ရရှိနိုင်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကသူမရဲ့ဇာတ်လမ်းအပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိနိုင်လဲဆိုတာငါတို့ခန့်မှန်းလို့ရတုန်းဘဲ။
Gamora ၏မျိုးစိတ်များသည် Thanos ၏ပြင်းထန်သောတရားစီရင်ခြင်းကိုခံနေရသည်။ ၎င်းသည်သူ၏စကြဝာကိုဟန်ချက်ညီစေရန်သူ၏အသက်တာ၏ထက်ဝက်ကိုသတ်ခြင်းအားဖြင့်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ သူသည် Infinity Stones များမ ၀ င်မီ၊ ဤအရာသည်သူတို့ထံသို့ခရီးသွားခြင်းနှင့်သူ၏တပ်အသီးသီးနှင့်အခြေအနေကိုကိုင်တွယ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
မွေးကင်းစ Gamora တွင်အလားအလာကောင်းများကိုမြင်သဖြင့် Thanos ကသူမအားသူမ၏ညီမ Nebula နှင့်အတူရက်စက်သောလူသတ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးခဲ့သည်။ Nebula သည်အဘယ်သို့လျှင်ပေါ်လာသနည်း။ p အဖြစ်art T'Challa Star-Lord သည် Thanos အားသူ၏ရှာဖွေမှုကိုရှောင်ဖယ်ရန်ယုံကြည်ခဲ့ပြီး Nebula သည်သူမ၏မွေးစားဖခင်နှင့်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိစေခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ Gamora ကိုငါတို့မမြင်ဖူးဘူး။
ဒါဟာ What If ရဲ့လာမယ့်ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Gamora ရဲ့ဒီဇာတ်လမ်းအပေါ်တုံ့ပြန်မှုကိုပြသခဲ့ပြီး Thanos ချန်ထားခဲ့တဲ့သံချပ်ကာနဲ့ဓါးကိုကောက်ကိုင်ပြီးဒါကအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် Gamora ကသူမရဲ့အဖေရဲ့ယူနီဖောင်းကို ၀ တ်ရုံထက်ပိုလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်မှာလား၊ မဆုံးဖြတ်ရသေးလား၊ ဒါပေမယ့်သူကသူ့တပ်အသီးသီးနဲ့သူ့ Black Order ကိုဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းဖို့ဟန်ချက်ကိုဆက်ရှာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်နဂါးငွေ့တန်းတွင်အန္တရာယ်အရှိဆုံးအမျိုးသမီးအတွက်အဓိပ္ပာယ်သစ်ကိုယူဆောင်လာသင့်သည်။
Blade of Thanos ၏ minifigure with Gamora သည်ဇာတ်လမ်းတွဲမှအခြားမည်သည့်နည်းနှင့်မျှတူပြီးရှားပါးသောအသွင်အပြင်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ Marvel ဆောင်ပုဒ်။ ငါတို့မှာဇာတ်ကောင်တစ် ဦး စီကိုရှင်းပြတဲ့လမ်းညွှန်အပြည့်ရှိတယ် 71031 Marvel စတူဒီယို စက်တင်ဘာ ၁ ရက်အတွက်သင်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်စီးရီးတစ်ခုလုံး၏သုံးသပ်ချက်ကိုကြည့်ရန်နှင့်စီးရီးတစ်ခုလုံး၏သုံးသပ်ချက်အပြည့်အစုံကိုကြည့်ပါ။
တစ်ခုထက်ပိုသော၊ သို့မဟုတ် minifigures များအပြည့်အ ၀ ပါ ၀ င်ရန်မျှော်လင့်သူမည်သူမဆို 71031 Marvel စတူဒီယို ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်ဆေးမှုကိုလိုချင်ပေမည် ဖြန့်ဝေလမ်းညွှန် ၎င်းကိုသင်သေတ္တာငယ်တစ်ခုတွင်အပြည့်အ ၀ တွေ့နိုင်မည့်နေရာကိုအတိအကျသိစေလိမ့်မည်။
Lego 71031 Marvel စတူဒီယို စက်တင်ဘာ ၁ ရက်တွင်စတင်ထုတ်ဝေသည် LEGO.com နှင့်စတိုးဆိုင်များတွင် အက္ခရာ ၁၂ လုံးသည်£ 12 / $ 3.49 / € 4.99 တစ်ခုစီအတွက်စုဆောင်းရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။
← LEGO သည် FC Barcelona set အတွက် teaser တစ်ခုကိုမကြာသေးမီကဖြန့်ချိခဲ့သည်
လိုင်စင်ရ LEGO အပြင်အဆင်ခြောက်ခုသည်မကြာမီကုန်ဆုံးသွားသည် →